Global Voices teny Malagasy » Però : Fankalazana Ny Fetiben’ny Masoandro · Global Voices teny Malagasy » Print
Però : Fankalazana Ny Fetiben'ny Masoandro
Voadika ny 02 Jolay 2013 3:58 GMT 1	 · Mpanoratra Gabriela Garcia Calderon Orbe Nandika (en) i Gabriela García Calderón, Nancy
Sokajy: Amerika Latina, Però, Mediam-bahoaka, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Maherin'ny 64.000 ny olona nankalaza ny Inti Raymi , Fetiben'ny Masoandro, tao amin'ny zaridaina arkeolojikan'i Saksayhuaman , tokony ho 15 km miala ny tanànan'i Cusco .
Nanomboka tao amin'ny fiangonan'i Coricancha  nombàn'ny fiarahabana ny masoandro, avy eo nitohy tao amin'ny Main Square no fizotry ny Inti Raymi. Farany, ny fara-tampon'ny lanonana dia ilay fankalazana tao amin'ny Saksaywaman.
Ny Inca, narahin'ny vadiny ( atao hoe coya) ary nohodidinin'ny olona maherin'ny 200 no niditra teo afovoan'ny kianja tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro, rehefa avy nandeha teo afovoan'ilay fiarovana mafy vita vato. Fankalazana maro no natao avy eo, toy ny fombafomban'ny chicha de jora  [es], ny afo sy ny sank’u, ny foto-tsakafon'ny Andeana ( ilazana ireo mponina any Andes).
Fahitana ankapobeny ny Inti Raymi. Sariy avy amin'i Ayla Zanini  ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-ND 2.0).
Manamarika ny solistisin'ny ririnina (solstice)  ny amin'ny ila-bolantany atsimo ny 24 Jona ; ilay andro fohy indrindra sy ny alina lava indrindra ao anatin'ny taona. Manamarika ny fiandohan'ny taona vaovao ny solistisin'ny ririnina, nandritra ny fotoanan'ny Inca, ary araka an'i Inca Garcilaso de la Vega, sady mpanoratra no mpahay ny tantara tamin'ny taonjato faha-17, dia io no tena lanonana ao anatin'ny taona.
Kanefa, any Cusco amin'izao fotoana izao, ilay daty dia mbola mihoatra lavitra noho ny fampisehoana ho an'ny mpizaha tany ary indrindra ho an'ireo mponina ao an-toerana izay mihevitra fa marika lehibe iray ho an'ny fahatsiarovantenan-dry zareo io tranga io ary hahatonga ny fahamaroan'ny fandraisan'anjaran'ny rehetra.
Fanazavan'ny  [es] tranonkala Bilaogy Toustodo ny atao hoe “solistisy” :
Raha araka ny Astronomia, dia fotoana mampa-avo indrindra ny firaikan'ny masoandro (23° 27’) ny Avaratra ary (-23° 27’) ny Atsimo raha oharina amin'ny fehin-tany ny solistisy.
Any amin'ny ila-bolantany Avaratra dia mahatratra ny tena haavony amin'ny mitatao vovonana eo ambonin'ny zana-pehintany Capricorne ny masoandro mandritra ny solistisin'ny ririnina, ny 20 na 21 Jona eo ni itrangan'izay. Any amin'ny ila-bolantany atsimo kosa, mahatratra ny tena haavony amin'ny mitatao vovonana eo ambonin'ny zana-pehintany Cancer ny masoandro ny 21 na 22 Jona.
Ny atao hoe solistisy dia vokatry ny firaikàn'ny tehezan'ny tany miohatra amin'ny làlany.
Mizara ny ampahany  [es] amin'ny tantaran'ny Inti Raymi ny bilaogy Medios Alternativos :
Nofoanan'ny fiangonana katolika ilay fankalazana rehefa tafiditra ny Espaniola mpanjanaka, ary niparitaka ny vondrom-piarahamonina Andeana izay nankalaza io lanonana fetiben'ny masoandro io. Adino teo ny Inti Raymi hatramin'ny tapaky ny taonjato faha-20, fotoana nampiverina indray ilay fankalazana ho toy ny fanehoan-kevitry ny hetsika lehibe hikendrena ny hamerenana indray ny kolontsaina zanatany ao Però.
Fotoam-pivavahana ny Inti Raymi tamin'ny andron'ny Inca, ankehitriny dia efa lasa seho an-tsehatra izy io, na izany aza anefa dia miteraka ny fahafantaran'ny olona ny maha-izy azy io fanehoan-kevitra io […]. Amin'ny fiteny niandohany, ny quechua, no anaovana ilay fampisehoana, ary adika amin'ny fiteny Espaniola mba ho mora azo kokoa.
Nisy ihany koa ireo filazalazana ny momba ny Fetiben'ny Masoandro tao amin'ny Twitter, tahaka ity nataon'i Kristell PerezAlbela (@Kristellpa ) ity:
@Kristellpa : Quisiera estar en el #IntiRaymi  !!
@Kristellpa  [es]: Tiako raha mba nanatrika ny #IntiRaymi  aho!!
Niteny tamim-pahasahiana i SanBlasSpanishSchool (@SanBlasSpanish ) hoe :
@SanBlasSpanish : Omaly ny Inti Raymi, anatenaiko fa nankasitrahanareo izany !
Nandritra izany fotoana izany kosa no nizaran'i Val (@Vientino ) ny fiandohan'ny fankalazana :
@Vientino : Desde el amanecer de ayer se celebró la fiesta del sol, el Inti Raymi, en las estepas y las serranías de los Andes.
@Vientino  [es]:Nanomboka omaly ka hatramin'ny androany maraina vao mangiran-dratsy no nankalazana ny fetiben'ny masoandro, ny Inti Raymi, teny amin'ny lembalemba sy ny tendrombohitr'i Andes.
Nanasongadina ny safidy raisin'ireo ray aman-dreny sasany rehefa hifidy ny anaran-janany i Anyel (@AnyelZae ):
@AnyelZae : Pucha aveces los padres estan estresados cuando escogen nombres a sus hijos #intiraymi  x ejmplo ..
@AnyelZae  [es]: Indraindray sahirana ireo ray aman-dreny rehefa hifidy ny anarana ho an-janany, ataovy hoe #intiraymi  ohatra …
Nozarain'i Ralph H (@lopezraulh ) avy any Arzantina ny fomba fankalazany io daty io :
@lopezraulh : Ayer en el trabajo festejamos el Inti Raymi. Con apacheta [montículo de piedras] y ofrenda.
@lopezraulh  [es]: Nankalazainay tany am-piasana niaraka tamin'ny apacheta (vato mifanongoa) sy ny fanomezana ny Inti Raymi omaly. Izany no tena maha-hafa kely antsika.
Farany, nobitsihan'i ronaldchamat (@ronaldchamat ) ny fihetseham-pony niaina ny Inti Raymi:
@ronaldchamat : Hace 5 años estuve presente en el #IntiRaymi , qué privilegio haber estado en ese lugar en ese preciso instante http://elcomercio.pe/actualidad/159… 
@ronaldchamat  [es]: Dimy taona lasa izay, nanatrika ny #IntiRaymi aho, tena tombontsoa ho ahy ny nahafahana nanatrika io fotoana io indrindra http://elcomercio.pe/actualidad/159… 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/07/02/49670/
 Inti Raymi: http://en.wikipedia.org/wiki/Inti_Raymi
 fizotry ny : http://peru21.pe/actualidad/mas-64-mil-personas-disfrutaron-inti-raymi-2137237
 chicha de jora: http://es.wikipedia.org/wiki/Chicha_de_jora
 Ayla Zanini: http://www.flickr.com/photos/aylazanini/
 solistisin'ny ririnina (solstice): http://en.wikipedia.org/wiki/Winter_solstice
 Inca Garcilaso de la Vega, : http://en.wikipedia.org/wiki/Garcilaso_de_la_Vega_(chronicler)
 Mizara ny ampahany: http://mediosalt.wordpress.com/2013/06/24/peru-se-celebro-el-inti-raymi-o-fiesta-del-sol/